Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. स्थलगत रिपोर्ट : भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू – Emountain TV
स्थलगत रिपोर्ट : भोलेबाबाको ताकमा युवतीहरू
कैलाली, २९ फागुन । एक जना महिला बिरामी भएर भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको घरमा आइन्। राधाजस्तै खचाखच मान्छे भरिएको आँगनमा उनलाई राखेर भोलेबाबा उर्फ रामबहादुरले। त्यसपछि झारफुक सुरु भयो, उनकी ‘पार्वती’ अथवा सुखड गाउँकी स्मारिका चौधरीबाट।
तिम्रो बिहेमा मैले पेन्टी उपहार दिएकी थिएँ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन हेर त तिम्रो पेन्टी फोहोर भएको छ । स्मारिकाले झारफुक गरेझैं गरेर भनिन्। ती महिलाले लजाउँदै खचाखच मान्छेबीच सलवार खोलिन् र पेन्टी देखाइन्। त्यहाँ भएका सबैले ताली पिटे’, राधामाथि कुटपिट हुनुभन्दा केही दिन अघिको एउटा घटना सुनाउँदै स्थानीय युवती रेनुका बोहराले भनिन्।
‘झारफुक गर्दा बिरामी युवतीले म पार्वती हुँ नभनुन्जेलसम्म रामबहादुरले पिट्थे। पिट्दापिट्दै कुनै युवतीले म पार्वती हु भनेपछि मात्र उनको उपचार सुरु हुन्थ्यो’, स्थानीय गीता धामीले भनिन्। भोलेबाबा उर्फ रामबहादुरले ती युवतीको उपचार गर्न १५ दिन समय माग्थे। ‘१५ दिन युवती भोलेबाबाको घरमा आइरहनुपर्ने, दैनिक झारफुक गर्नैपर्ने भएकाले उसले युवतीलाई बढी सताउने पुष्टि हुन्छ’, उनले भनिन्।
पार्वती बुढा घोडाघोडी नगरपालिका ५ देउकलियास्थित राष्ट्रिय माविमा १० कक्षामा अध्ययन गर्छिन्। उनी भूतप्रेतमा विश्वास गर्दिनन्। गाउँका एक युवाले भोलेबाबाको ढोंग रचेर युवतीलाई ‘टार्गेट’ बनाएको उनलाई एकरत्ति मन परेको थिएन। ‘गाउँकै चिनेको मान्छे, तपार्इंले गरिरहेको काम ठीक होइन भनेको त मेरो ढाडमा दुई\_तीन पल्ट हिर्कायो र म भागेँ’, उनले भनिन्, ‘तँ मलाई विश्वास नगर्ने मलाई विश्वास नगर्नेलाई म नास गरिदिन्छु भनेर धम्कायो।’
भोलेबाबा उर्फ रामबहादुर, किस्मती र स्मारिकाविरुद्ध राधा र अर्की एक महिलाले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बोक्सी आरोपमा अमानवीय यातना दिएको उजुरी हालेका छन्। प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
महाकाली नदीको तटिय क्षेत्रमा लागुऔषधको कारोबार बढ्दो
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा विकासले गति लियो
निजगढमा रहेको एक पसलबाट पाँच लाख बराबरको सामान चोरी
एसईई नतिजामा चरम लापर्बाही, विद्यार्थी आक्रोसित
बाजुरामा हाते ट्याक्टरबाट धान रोपिदै
महाकाली नदीमा निर्माणधीन तटबन्ध अलपत्र
सरकारद्वारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा इटालियन ठेकेदारको म्याद तीन महिना थप
चिरीबाबुले बजेट ल्याउन सकेनन्